China igxalaba isongele ipakethe yefektri kunye nabenzi | Huanyi
Igama lemveliso: Ipakethe yeGel Pad yeGel yeNeck
Ubukhulu: 22 * 7.5 intshi
Elungiselelweyo logo kunye package
Isiqinisekiso: I-SGS, i-FDA, i-CE, i-REACH, i-PROP65, i-BSCI
Le miqulu ye-gel igcina iguquguqukayo emva komkhenkce, ukuze uzibeke ejikeleze idolo, igxalaba kunye nentamo.
Kutheni sikhetha i-gel ice pack ukunciphisa iintlungu?
Nokuba unentlungu emva ngenxa yokuhamba ngebhayisikile, okanye ukudumba okubuhlungu kuqhaqho, sebenzisa nje le pack yomkhenkce wentlungu nethambo.
Emva kweeyure ezimbalwa kwifriji, ipakethe yomkhenkce yokwenzakala ibanda kakhulu! Ngapha koko, kuyabanda kakhulu, sele sikwenzile ukuphinda sibuyele umva kwipakethe yomkhenkce ukhululekile ukuba ufumane isiqabu.
1. Iminyaka eli-10 yamava e-OEM, i-ODM, umbala oCwangcisiweyo, ilogo, iipakeji. Ngaba unokukunika iingcebiso zobungcali ngokusetyenziswa kunye nokugcinwa, ukukhetha esona sisombululo sisiso kwimveliso yakho.
4.Kuba loo maphakethe omkhenkce, umzi-mveliso wethu unobungakanani obahlukeneyo kunye nemilo oyikhethileyo, inokulingana abantu abaninzi.
Egqithileyo Ityhubhu eshushu yokufudumeza ijeli
Okulandelayo: ishushu kunye nepakethe yegel
Iphakethe ebandayo entanyeni
Iipakethe ezibandayo zamagxa